I-Rfid Tags, Ikhadi le-Rfid, i-Rfid Wristband - Toptag
Njengomkhiqizi wemikhiqizo ye-RFID enolwazi, sinikezela ngemikhiqizo engcono kakhulu.
IZINKONZO EZINGEMPELA ZENZAKALELAYO
Ithimba labadayisi be-Toptag lingakunikeza iziphakamiso zochwepheshe zesidingo sakho esingokwezifiso.Sikunikeza amasampula wamahhala wokuhlola kwakho.
I-Toptag ihlale ithuthukisa inqubo yokukhiqiza, yehlisa izindleko zokukhiqiza, futhi ithuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza, ukuhlinzeka amakhasimende ngekhwalithi enhle nemikhiqizo eshibhile.
iminyaka engaphezu kwengu-20 isipiliyoni sokukhiqiza, izinduku ezingu-2000, amaqembu angu-10 e-R&D kanye nemigqa engu-20 yokukhiqiza ejwayelekile yamakhadi namathegi.I-Toptag inikezela ku-R&D, ikhiqiza nokudayiswa kwemikhiqizo ye-RFID nesixazululo se-RFID.
Sihlinzeka ngezinhlobo ezahlukene zamathegi e-rfid ohlelo lokusebenza oluhlukile.Sakha imikhiqizo emisha ye-RFID ngokwezidingo zamakhasimende...
Ama-transponder e-Toptag asiza ukuqinisekisa ukulandeleka okungenamthungo futhi anciphise ukulahlekelwa, kuyilapho kuthuthukisa ukuphathwa kwesitoko nesivinini sokucubungula.Omaka be-RFID abangathinteki bathuthukisa isivinini nokunemba kokuqoqwa kwedatha, okwenza ukulandelela kubize kakhulu kuyilapho kukhulisa ukunemba.
Isebenzisa ubuchwepheshe be-RFID ukuphatha ngempumelelo amalineni ezentengiselwano noma angasese, izingubo noma amacansi, ukuthuthukisa i-inventory kanye nokunciphisa amaphutha omuntu ezinqubweni zokuwasha nezokukhokhisa.I-Toptag inobudlelwano besikhathi eside no-Hilton, uMarriot.
Ubuchwepheshe bemicimbi obungenazintambo sebujwayelekile emikhosini yomculo ehamba phambili yezwe, nabalandeli ngokuziqhenya begqoka amabhande abo asesihlakaleni e-RFID unyaka wonke njengamabheji okuhlonipha.I-Toptag yaba nokubambisana nemikhosi eminingi efana ne-Rio festival, i-SnowGlobe Music Festival njll.
Amathikithi Omcimbi Nokuzijabulisa
I-Toptag inobuchwepheshe obuthuthukisiwe bokuhlanganisa ukuphatha zonke izici zokuhlangenwe nakho kokunakekelwa kwezempilo ngaphakathi kwendawo eyingqayizivele yesikhungo sokunakekelwa kwezempilo - ukuphathwa kwezivakashi, ukulandelela impahla kanye nokuqapha izimo, izinsizakalo zendawo zesikhathi sangempela, ukukhokha kanye nokuthula kwengqondo.
Ngamashumi eminyaka yokuhlangenwe nakho ekuthuthukisweni kwezixazululo eziqinile zokulawula ukufinyelela kokufinyelela ngokomzimba nokunengqondo, i-Toptag ithenjwa izinhlangano kanye nohulumeni ukunikeza izixazululo ezingenakuqhathaniswa zokuphepha nokuvikela.
Amathegi e-RFID avumela amasistimu ukuthi akhombe izimoto ezizokhonjwa nge-elekthronikhi uma usuka kude namamitha.Izimoto zingahlolwa ngokuzenzakalelayo, kanye nomthwalo okhonjiwe.Angabuye ahlolwe futhi kalula nje.Ngosizo lochwepheshe, i-RFID inganikeza indlela enokwethenjelwa yokuhlonza izinhlobonhlobo zezimoto, izibeke endaweni ethile noma endaweni ethile ngaphakathi kwesayithi, evame ukusetshenziselwa i-ETC noma ukuphathwa kweParking.
Ukumaka imfuyo nge-RFID kungaba ithuluzi elibalulekile enqolobaneni yomlimi ukuhlonza isilwane ngasinye kanye nozalo lwaso nolwazi lwezokwelapha.Odokotela bezilwane manje baphusha ukuthi zonke izilwane zasendlini zilandelelwe kusetshenziswa i-RFID ukuze bakhe uhlelo lokuhlonza izilwane ezifuywayo ezilahlekile nezitholiwe.
Ama-RFID-on-metal transponders angaba sebangeni elibanzi lokulandelela impahla kanye nezinhlelo zokusebenza ezibanzi zezimboni.Izinhlelo zokusebenza eziyinhloko ukulandelela impahla kumaseva namakhompyutha aphathekayo ezikhungweni zedatha ye-IT, ukulawulwa kwekhwalithi yokukhiqiza izimboni nokukhiqiza, ukugcinwa kwamapayipi kawoyela negesi, namasilinda egesi, ukulandelela amathuluzi, ukulandelela izikhali, nokulawula ikhwalithi yedivayisi yezokwelapha.
Namuhla, kungakhathaliseki ukuthi ku-EC nakumakhadi esikweletu, amakhadi omazisi womuntu siqu, amaphasipoti noma amakhadi omshwalense wezempilo, idatha igcinwa kuma-chips amaningi e-RFID, ngosizo lohlelo lokusebenza olufanelekile, idatha yomuntu siqu ingafundwa ngasese ngama-smart phone.Amakhadi e-Toptag's RFID Blocking anikeza isivikelo esithembekile ekufundweni okungagunyaziwe kwedatha ebangeni lefrikhwensi engu-13.56 MHz.
Inkampani yethu yasungulwa ngo-2008 inamahhovisi amabili amakhulu atholakala eHong Kong naseShenzhen, eChina.Inkampani yethu isungulwe yiqembu labantu abanothando nabanobuhlakani abanolwazi olucebile lwe-RFID yokuhweba nokwenza.Inkampani yethu ikhethekile kumathegi namalebula e-RFID ahlukahlukene anomumo nezinto ezisetshenziswayo.Amathegi ethu asukela emazingeni aphansi ukuya kuma-ultra-high, asetshenziswa kabanzi emkhakheni we-NFC, ukukhokha ngeselula, ukulawula ukufinyelela, ukuphathwa kwe-supply chain, ukuphathwa kwempahla, ukugcinwa nokuphathwa kwezinto, ukuphathwa kwemfuyo nokunye.